TIPS: 24 HACK JEANS HACKS || BADBAADO IYO WAXYAALO DHALINYARADA DHALINYARADA - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » VIDEOS »TIPS: 24 HACK JEANS HACKS || SOO BANDHIGI IYO WAXYAALO DHALINYARADA
TIPS: 24 HACK JEANS HACKS || SOO BANDHIGI IYO WAXYAALO DHALINYARADA
Raadi ururinta dharka aan fiicnayn oo kaa caawin doona inaad diyaar u hesho guga! Waxaad ogaan doontaa sida ay u fududahay in dhar lagu sameeyo iyada oo aan xirfad gaar ah lahayn. Halkan waxaa ku jira ururinta farshaxan oo aad ka sameyn karto jootooyinka hore iyo sida loo kabo dharkaagii hore ee dharkaaga. Intaa waxaa dheer, waxaad baran doontaa sida loo sameeyo budada jilicsan ee hore. Miyuu waalan yahay?
Baro mashruuca aan dhammays tirnayn sida loo sameeyo dambiilaha digaagga. Waxay u fiicanyihiin in lagu keydiyo gacmahaaga ama alaabada lagu qurxiyo iyo musqulahaagu aad uga roonaado. Ha iska tuurin joornaaladaada hore iyo inaad sameyso jaakad deyn ah ama boorsada wax iibsiga ah. Waad ku hagaajin kartaa godadka dharka ku leh dharka. Intaa waxaa dheer, waa hab ku habboon in loo sameeyo shakhsi dhar ah oo lagu kaydiyo lacag sababtoo ah alaabta dukaamada ee dukaamada waa qaali. Waxaad ka heli doontaa barashada fudud ee bilowga ah. Qaado maqaarkaaga oo gooyo joornaal jireed si aad u sameyso kiis telefoon ama kabaha guriga.
Fikrad kale oo wanaagsan ayaa ah in la sameeyo meel caan ah oo ay ku shaqeyso beerta. Baro sida loo qurxiyo oo loo dhigo meel aad u fiican. Keliya dooro dharka aad jeceshahay!
Marka caloosha si degdeg ah u kaco inta lagu jiro uurka, waxaad had iyo jeer ubaahantahay dhar cusub. Ha iibsan joornaalada qaaliga ah ee qaaliga ah sababtoo ah waxaan ognahay sida joodariga caadiga ah loo jeexo jilitaanka uurka. Ku beddel jeebabka hore ee leh surwaalada bacriminta uurka leh iyo jilicsan ee kuugu sarreeya qarashka! Suufiyadan waxay qaateen dhowr daqiiqo oo ay ku dhammaystiraan oo ay aad ugu raaxaystaan ​​kobaca caloosha.
Waa hawl aad u adag in la helo dhar jilicsan oo adag. Marka hore, waa inaad ogaataa nooca jirkaaga. Halkan waxaa ah kuwa ugu waaweyn: oval, leydi, saddexagal, pear, saacado yar-yar.
02: Tababarka 38 Casharka
03: 50 DIY ah
04: 33 Daaroodka Denim
05: 34 DIY khaanad u shaqeynta beerta
07: 28 Sida loo doorto jean sareysa
19: Rugta 56
Tani waxay u muuqatay mid hore https://www.youtube.com/watch?v=Lcu5COtrdrk
Samuel Eto a révélé le fait que – VIDEO